प्राप्ती मात्र प्रेम होईन्
प्रेम । हजुर यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ? त्यो मेरोभन्दा फरक छ । र, म जे बुझ्छु त्यो भन्दा फरक उनको बुझाई होला । उनी अर्थात यो सत्यकथाकी केन्द्रिय पात्र ! मेरो भन्नुको तात्पर्य – अस्तित्वमा रहेका हर बस्तु र विषयका सम्बन्धमा मानिसहरुका पृथक बुझाईहरु हुन्छन् । छन् । झन प्रेम त स्वयंको अनुभूति हो । र, यसलाई अनुभूत गर्ने मानिसले आफ्नै हिसाबले यसको विश्लेषण गर्न पाउनु पर्छ – यो मेरो मान्यता हो । मलाई विश्वास छ यसमा यहाँको पनि असहमति रहने छैन ।
उनी, मेरी शिष्य । पृथक लाग्छ मलाई उनको जीवन जिउने शैली । मानिसहरुसँग उनले गर्ने अन्तरक्रिया मलाई नौलो लाग्छ । मनपर्छ उनको यो शैली । प्रायः कम बोल्छिन् । वा बोल्दैबोल्दिनन् । तर जब बोल्न थाल्छिन् सबैलाई नजिकको ठान्ने गर्छिन । सायद स्त्री जातिको विशेषता हो, यो । क्षणभरमै खुल्ने ! तर उनको कुरालाई विश्वास गर्ने हो, उनी भन्छिन् – उनी धेरै कम ब्यक्तिहरुलाई मात्र आफ्ना ब्यक्तिगत अनुभवहरु सुनाउन लायक ठान्छिन् । विशेषगरी दुःखका अनुभूतिहरु !
उनले फेसबुके गफगाफमा भनिन् – “सर, म एकदमै टेन्सन (तनाव) मा छु, आजभोली ।” म झस्केँ । अनि सोधेँ – “के भो नानु ?” उनले बताईन् – “म हजुरलाई पहिले नै भन्नेवाला थिएँ तर भनेको थिइँन । सर म कसैसँग प्रेमसम्बन्धमा थिएँ । र, केहिदिन पहिलेदेखि उसले मलाई वास्ता गर्न छाडेको छ । उसले धोखा दियो, मलाई । र, मैले उसको नाम बताएँ भने हजुरले पनि विश्वास गर्नुहुन्न !” मलाई अचम्म लाग्छ, विगतमा एउटा शिक्षकका हिसावले जोजोसँग म नजिक भएँ, उनीहरुले मलाई निकै नै विश्वास गर्दछन् । उनीहरुका घरायसी कुराहरु पनि मसँग बाड्छन् । र, प्रेममा अनुभूत गरेका उतारचढावहरु पनि सुनाउन धक मान्दैनन् । त्यसकारण थुप्रै मानिसहरुको परिभाषामा म शिक्षक हुन सकेको छैन । तैपनि मेरो मान्यता हो, आफ्ना शिष्यहरुको हरेक अप्ठ्याराहरुमा सहजता ल्याउनु वा सहजता ल्याउने प्रयास गर्नु गुरुको धर्म हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि म उनका लागि यो लेख्तैछु ।
प्रिय छात्रा, प्राप्ती मात्र प्रेम हैन । मैले बुझेको सत्य हो यो । मैले लेख्नै पर्ने हुन्छ – प्रेममा प्राप्त गर्ने मानिसहरु संसारमा थोरै मात्रा छन् । अधिकांशहरु प्रेममा गुमाउँछन् । जो जसले जे जे पाएँ तिनले खास केहि पाउँदैनन्, तर जसले गुमाएँ तीनले खास धेरै पाउँछन् जीवनमा ! जीवन जिउनुको अर्थ बुझ्छन् । प्रेमले जीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा बुझ्ने मौका पाउँछन् । र, थाहा छ ? प्रेममा धोखा खाएका भन्नेहरुले विशेष के पाउँछन् ? उनीहरुले यो थाहा पाउँछन् कि संसारमा सबै मानिसहरु विश्वासयोग्य हुँदैनन् । र, तिमी नै भनन् यो कति महत्वपूर्ण ज्ञान हो । यो कति ओजस्वी ज्ञान हो । कतिपय मानिसहरुले चितामा पुग्नेबेलासम्म यो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्तैनन् । उनीहरु संसारका सबभन्दा अभागी मानिसहरु हुन् । किनकी उनीहरु कहिल्यै प्रेममा परेनन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि, त्यसकारण उनीहरुले प्रेममा गुमाउनुको अर्थ बुझेनन् ।
मलाई थाहा छ, पहिलो प्रेम अजीवको हुन्छ । मेरो अनुभूतिले भन्छ, पहिलो प्रेम अदभूत हुन्छ । अविष्मरणीय हुन्छ । परन्तु, तिमीले यो कुरा थाहा पाउन पनि धोखा त पाउनै पर्ने हुन्छ । नत्र तिमीले यो बोध गर्नै पाउँदिनौं कि पहिलो प्रेम कस्तो हुन्छ ? र, विशेष त यो छ कि जब तिमीले प्रेममा धोखा प्राप्त गर्छ्यौ, तिम्रा लागि झन विशेष प्रेम पहिले नै तयार भैसकेको हुन्छ । गुमाइसकेको प्रेमका विषयमा ज्यादा चिन्तित हुनु हामीहरुका लागि शोभनीय कुरो हैन । त्यसैले नेपालीमा एउटा उखान पनि छ नी – “फुत्केको माछो ठूलो देखेर हुँदैन ।” किन थाहा छ ? हातमा परेका अरु माछाहरु पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थः तिमी सधैं यो बुझिराख कि तिमिले गुमाएको प्रेमभन्दा अब प्राप्त गर्ने प्रेम अद्भूत छ । अलौकिक छ । र, यो छ अनुपम !
Though I have different perception and understanding about love, I love the style of writing :)
pahilo pahilo mayako, samjana samjana kusume rumal..hohoho..bhanne geet yad aayo..:)